01.09.2019 by Tojar Alternative
Papegaai Is Ziek - Various - Liedjes Met Een Hoepeltje Erom Deel 4 (CD), David & Steve Gordon - Yoga Planet (CD), I See Your Smile - Various - Kuschelrock 7 (CD), Mrs Nichols Almand - Dowland* / Hesperion XX* - Lachrimae Or Seven Teares (CD), Dama (Lady) - Kenny Rogers - 20 Grandes Exitos (Vinyl, LP), Masters Of Torture - Cough - Still They Pray (Vinyl, LP, Album), Sonata No. 3 in E Major (1942): Allegro energetico - Ross Lee Finney - Piano Works (CD, Album), Van-e Helyem? (White House Mix) - Baby Gabi - Van-e Helyem? (CD), Gargling Drummer - Terry S. Taylor* - Neverhood Songs (CD), Semilla - Semilla (4) - Música De Los Terrones (CD, Album), Insane - Tamara Wellons - Life Is (CD, Album)
8 thoughts on “ Matoky Izahay ”
Sep 21, · Ity hira ity dia vavaka fanoloran-tena, koa mino sy matoky izahay fa akasika anao tokoa izany hira izany sy ankafizinao!
2 Vohay ny vavahady, mba hidiran'ny firenena marina, izay mitana ny fahamarinana. 3 Ny saina tsy miovaova dia harovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka, satria matoky Anao izy. 4 Matokia an'i Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no Vatolampy mandrakizay. 5 Fa naetriny ny mponina avo toerana; Ny tanàna avo dia arodany, eny, arodany ho amin'ny tany ka:azerany ho amin'ny vovoka.
Finaritra ny fo matoky Anao) Jesoa Tompo o, be indrafo) 2x Tsy kamboty izahay fa manana Anao) Ka ny herinao no ampinganay) 2x Raha ho tapitra aminay ity fiainana ity) Ento zahay ho eo anilanao) 2x.
Manolotra anao izahay mba hanomezana fanampiana ara-bola mivantana an'i Fr. Michel noho io ezaka lehibe indrindra io. Raha tsapanao hoe niantso ianao, dia andefaso fanomezana eo amin'ny adiresy etsy ambany. (Fr. Michel dia tsy nangataka anay hanao izany! Ary koa, tsy misy fomba an-tserasera ahafahana mandray anjara). Alefaso azafady ny fisavana.
Nov 02, · Faly, tena faly ny vahoakan'i Manombo Be nahita an i Fernand Cello izao hariva izao. "Hifidy ny Filoha Ravalomanana izahay rehefa manohana azy ianao sy Arnaud Avimana na i Nono Jupiter. Mijaly zahay eto satria lasa kamboty tsy misy mpiaro intsony rehefa niala ianareo mirahalahy". Fokontany anisan'ny be mpifidy ny eto ka matoky izahay fa ho lany i Dada.
Jun 19, · Edouard Tsarahame, filoha lefitry ny RMDM: Izahay ato amin'ny RMDM dia tsy matoky intsony ity fitondram-panjakana misy eto Madagasikara ity Ary tsy misy azo antenaina entina mampandroso an'i Madagasikara ny fomba entin'ny fitondram-panjakana mitantana ny firenena. Koa mangataka izahay ny fametraham-pialàna haingana amin'ny fotoana rehetra.
Nahoana no matoky anay “Mpanjifa efa nandoa vola izahay HostGator nanomboka ny volana aogositra Manara-maso anay izahay HostGatormpizara fampiantranoana nizara ho an'ny Uptime sy Performance amin'ny alàlanay Tranonkala fitsapana.. Ity famerenana momba ny HostGator mifototra amin'ny fanandramana tena natao amin'ireo mpizara azy.
Rehefa nifanao veloma tamin-kafanam-po izahay dia niangavy ny vehivavy malala iray hoe: “Rahavavy Burton, aza manadino anay e!” Antenaiko fa izy sy ireo hafa izay te hotsaroana dia hahatsapa izany eto am-pizarako eritreritra vitsivitsy aminareo. Vehivavy matoky tena tamin’ny andron’ny Mpamonjy: Mifototra amin’ny Mpamonjy Jesoa Kristy.
Psycho Love - Kapatid - Luha (CD, Album)
Ibiza (El Mix Del La Noche)
Run Boy Run - Lee Hazlewood - Son Of A Gun (CD)
Bus Ride - Various - Cavaliers Club Volume One (File, MP3)
Mutaur on Matoky Izahay